မြန်မာအသင်းနှင့် အိုမန်အသင်းပွဲ ပထမပိုင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာအသင်းနှင့် အိုမန်အသင်းပွဲ ပထမပိုင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့
မြန်မာအသင်းနှင့် အိုမန်အသင်းပွဲ ပထမပိုင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့
Posted by Burma on Jul 28, 2011 in Myanma News, Sports & Recreation | 14 comments
ယနေ့ သုဝဏ ကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာဖလား အာရှဇုန်အဆင့် ဒုတိယခြေစစ်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်းနှင့် အိုမန်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိင်ရာတွင် ပထမပိုင်း 45 မကုန်မီတွင် အိုမန်အသင်းက2ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိနေခဲ့သည်။ အိုမန်အသင်း ဒုတိယဂိုးကို ပင်နယ်တီမှ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ မြန်မာအသင်းပရိတ်သတ်3သောင်းကျော်တို့သည် ပေါက်ကွဲပြီး ပစ္စည်းများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြသဖြင့် ပွဲမှာ ခေတ္တရပ်ထားခဲ့ရသည်။ ပထမပိုင်းပြီးကာ7မိနစ်အချိန်ပိုပေးခဲ့သော်လည်း ပွဲမှာ မဆက်နိုင်ပဲ အိုမန် ဂိုးသမားမှာ အိုမန် ဂိုးတိုင်ကိုပင် မကပ်ရဲခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် မြန်မာပရိတ်သတ်ဘက်မှ ပစ်လိုက်သော ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ အိုမန် အသင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဆီသို့ အရန်ခုံတန်းအမိုးပေါက်ကာ မှန်သွားခဲ့သောကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ကြောင်းသိရသည်။
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဦးဇော်ဇော် တောင်းပန်သော်လည်း မရပဲ ဦးဇော်ဇော်ကိုပါ ဖိနပ်တွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကြကြောင်း ၊ အဆိုးဆုံးမှာ ရိုးရိုးတန်းကဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံလာသူက ပြောပြသည်။
နောက်ဆုံး ဖုန်းဆက်မေးမြန်းချက်အရ ဂျင်ကလိတွေပါတွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ ယခုအချိန်တွင် တာဝန်ရှိသူများ အစည်းအဝေး ထိုင်နေပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိကြောင်း
4 ပုံ3ပုံမှာ ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပြီး ကျန် 1 ပုံမှာ ဆက်လက် ပြီး အားပေးနေကြာကြောင်း ၊ ပွဲပျက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ မှသာ ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းလဲသိရသည်။
စောစောကအွန်လိုင်းက ၀င်ကြည့်တော့ ၂ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် အခုဒီပို့စ်တွေ့ရမှ ပိုသိသွားရတယ် စိတ်မကောင်းပါ မြန်မာပီပီ ကိုယ့်မြန်မာအသင်းပဲ နိုင်စေချင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ အခု ဆူပူရမ်းကားမှုမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါ နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာလဲကျ နိုင်ငံကြီးသား မပီသရာလဲ ရောက်ပါတယ် ဒိုင်လူကြီးက မတရားလုပ်တယ်ဆို တရားဝင်ကန့်ကွက် စိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်လွန်းရင်လဲ ၀ိုင်းဆဲကြပေါ့ နောင် မြန်မာပြည်မှာ လုပ်မဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲတွေကိုတောင် ထိခိုက်မှာ စိုးရတယ်
ဟုတ်ပါတယ် ။အရမ်းကို ဆိုးပါတယ် နောင် နိုင်ငံတကာပွဲတွေကတော့ လုပ်လို့ရမယ် မထင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြန်လာတုန်းကတော့ တံတားပေါ်ကလှမ်းကြည့် လူတော်တော်များများကျန်နေပါသေးတယ်။ ရဲတွေလဲ ထပ်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က အိုမန်နှင့် ပထမ အကျော့ အဝေးကွင်း သွားကန်ခဲ့ရာမှာ ၀-၂ ဖြင့်
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ယခု ဇူလိုင် ၂၈ ရန်ကုန် အိမ်ကွင်း ထပ်ကန်ရာ ၃-၀ ဖြင့် အိုမန် အသင်းအား ဂိုးပြတ် ထပ်ရှုံးခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန် အခြေစိုက် သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သော ကွမ်းယာသည် ဘိုကွမ်းမှ ပေါ်ပေါ်သို့အတည်ပြုပြောကြားသွားခဲ့ပါကြောင်း။
ပွဲစဉ်မပြီးသော်လဲ မြန်မာပရိတ်သတ် အချို့ ၏ နွေးထွေးစာ အားပေးမှုကြောင့် ရဲများပင်ထိန်းမနိုင်ပဲ ဖြစ်ရကား အိုမန်ကစားသမား..နည်းပြများလဲ…မိမိတို့အထုတ်ပင် ကောက်မသယ်နိုင်တော့်ပဲ လုံခြုံရာ အခန်း သို့ မနှေးမြန်စွာ သုတ်ကြသောကြောင့်..မြန်မာအသင်းသည် လတ်တလောအခြအနေအရ ပြိုင်ဘက်မဲ့ ၃-၀ ဖြင့် ရှုံးနိမ့်လျက်ရှိနေကြောင်း..
နောက်ထပ် ခြောက်ဂိုးတိတိ မသွင်းနိုင်ရင် ရှုံးဘီလို့ သာမှတ်ပေတော့.
နည်းပြ ထိတ်ပေါက်တာတော့ အပေါ်မှာ ပါပြီးသားမို့ ပြောတော့ဘူး။
ကျွန်တော် မြန်မာ့အသံက ကြည့်နေတာ။ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ ပြောရရင် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာဘဲ။
ဒီလိုလုပ်ပုံက ကျွန်တော်တို့ကို တော်တော်အောက်တန်းကျသွားစေတာပဲ။နောက်ပိုင်းဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ကို ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မပေးမှာတောင် စိုးရတယ်။
မှန်အိမ်မှာနေသောသူသည် သူတစ်ပါးမှန်အိမ်ကို ခဲနဲ့မပေါက်ဆိုတဲ့ ဆိုစကား ရှိပါတယ်။
ပြည်သူတွေ အဆင့်အတန်းမြင့်မှ နိုင်ငံ့အဆင့်အတန်းမြင့်မှာပါ။
ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအဆင့်မီတဲ့ ဒေသမှာနေတဲ့လူတွေဟာ အောက်တန်းကျတဲ့အပြုအမှု မလုပ်ကြပါ။
တရားမျှတမှုကင်းမဲ့တဲ့၊ လွတ်လပ်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေမှာ ဘောလုံးပွဲတွေဟာ
ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အဖြေရှာနိုင်ပါစေ…။
စလောင်းရှိတဲ့သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ အလုပ်နားပြီးတော့ သွားကြည့်တောင်မှ ပွဲပြီးအောင်မကြည့်လိုက်ရဘူး။
တို့ မြန်မာ ပြောင်ပြီ
ဒါ….နိုင်ငံတခုရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုပြတဲ့ပြရုပ်တခုပါဘဲ …ဆင်ချင်နိုင်ကြပါစေ…
ပရိတ်သတ်တွေကြောင့် တစ်ခါ..၂ ခါ
သုဝဏ္ဏ ကွင်း၊ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲ၊ မြန်မာတို့၏စိတ်ဓာတ် နှင့် နာယက ခေါင်းဆောင်
by Ernesto Kee Ling on Thursday, July 28, 2011 at 6:33am
ဂျူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ တိမ်ကင်းစင်လေသော အခါသမယ ညနေ ၂နာရီခွဲ Ernesto တစ်ယောက် မြန်မာတို့၏ အမှတ်မရှိသော
စိတ်ဓာတ်အပြည့်နှင့် သုဝဏ္ဏ ကွင်းဆီသို့ ချီတက်ခဲ့သည်။ ကွင်းဝအရောက် ရွှေမြန်မာတို့ အကျင့် အတိုင်း မှောင်ခိုဈေးကွက်မှ လက်မှတ်များကို အထူးတန်းမှကြည့်ရန် ၃၀၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ တရားဝင်ရောင်းဈေးမှာ ၁၀၀၀ ..။ သို့နှင့် လက်မှတ်ကိုင်ကာ သူငယ်ချင်းတစ်စုနှင့် ဂိတ်ပေါက်မှ ၀င်မည်ဟု တန်းစီလူတန်းကြီးနောက် ၀င်ရောက်တန်းစီ..။သို့ရာတွင် နေထိုင်သည်က မြန်မာပြည်၊
ကိုင်ထားသည်က မှောင်ခိုလက်မှတ် ပုံမှန်ဂိတ်က ပိတ်နေ။ သြော် မြန်မာ ပြည်သားပေပဲ ။ ဘယ်ရမလဲ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်တွေ
ကားဝင်ရန်ဂိတ်မှ တံခါးနားတွင်သွားစောင့် ။ လာပါပြီ အမြီးရှည်နဲ့ တစ်ကောင် သူ့ကားအ၀င် သူငယ်ချင်းတစ်အုပ် လက်ကိုတွဲ “ သားကြီးတို့ရေ ကိုင်ထားဟ လူစုကွဲနေမယ် ” အချင်းချင်း အော်ပြော … အတင်းတိုးဝင်..။ ဒီလိုနဲ့ အထူးတန်းပေါ်ပြေးတက် လားလား နည်းတဲ့လူအုပ်ကြီးလား မြန်မာဟူသော အသိ အချင်းချင်းစည်းလုံးလိုက်ကြတာ “ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ ” အော်သံတွေ ပဲ့တင်ထပ်လို့ပေါ့ ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ကို လှမ်းပြော ဟေ့ကောင်တွေ ငါတို့နေရာတွေ မှာ လူအပြည့်ပဲ နေရာမရှိတော့ဘူး ။ အာကာ က ပြန်ပြောလိုက်တယ် ဒါဆိုလည်း ရတဲ့နေရာမှာ မတ်တပ်ရပ်လို့ရမယ့်နေရာ ရှာကွာ တဲ့။ ရပ်ဖို့နေရာရ ပါပြီ။ အာကာနဲ့ ကျောင်းတော်က ရန်စမကင်းတဲ့ကောင်နဲ့ ကပ်လို့ ..။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ အသင်းကိုချစ်လို့တူတူ လာအားပေးကြတာပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဟေ့ကောင် နေရာမရရင် ငါ့နားမှာလွတ်တယ် လာခဲ့…။ တည့်နေကြတာပေါ့ဗျာ..။ အဲ့ဒါမြန်မာလေ..။မြန်မာအသင်းကိုချစ်တဲ့ မြန်မာတွေလေ။
ဘေးဘီဝဲယာ တစ်ချက်ဖမ်းရှိုးတော့ လားလား GTC ကျောင်းဝတ်စုံတွေနဲ့ ဆေး-၂ က သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ နှင့် လား လား.. အဖြူအစိမ်းတွေနဲ့တောင်ပါသေး။ သူတို့တွေ ဒီပွဲအတွက် အတန်းတွေ ဖျက်လာကြတယ်လေ။ Ernesto ရောဘာထူးလဲ မကွေးကနေ လာကြည့်တာဆိုတော့ ကျောင်းက ပျက်ပေါ့။ မြန်မာအသင်းကိုချစ်တဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်ပါရင်တောင် အားပေးတတ်တဲ့ ညာဉ်ဆိုးကြောင့်ပေါ့။
Ernesto လေ မြန်မာပွဲတွေကြည့်ရင် ကြက်သီးထတဲ့ အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ် ။ ပရိသတ်တွေ အားလုံးတူညီ “နိုင်ငံတော်သီချင်း” ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့။ ပွဲစပြီ နိုင်ငံတော်သီချင်းနဲ့ ။ Ernesto တို့နားက ဗုံနဲ့ဗျား…။ပွဲစတော့ မြန်မာက နည်းနည်းဖိထားပါတယ်။ ဂိုးနားတော့ သိပ်မရောက်သေးပါဘူး။ အိုမန်တွေက skill သာတယ် ( မြန်မာတွေထက်ပေါ့ )။ ဒီလိုနဲ့ ၂၂မိနစ်လောက်မှာ ဂိုးပေးလိုက်ရတယ် ။မြန်မာဂိုးသမားနဲ့ နောက်တန်းတို့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ပေါ့။ ဆဲဆိုသံတွေ ဆူညံပွက်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခဏပါပဲ ဗုံသံမြိုင်မြိုင် နဲ့ “ မြန်မာ ” အော်သံတွေ ကွင်းလုံးလျှံတက် ထွက်လာတာပါပဲ။ မြန်မာတွေလေဗျာ.. မြန်မာ ဆိုတဲ့အသံကြားရင် သွေးသားထဲက ဆူတက်နေတဲ့ မြန်မာတွေလေဗျာ။ Ernesto တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုထဲ မှာ အသက်အကြီးဆုံး ကိုလင်းထွန်းက သူ့ရှေ့က အလံ လွှင့်နေတဲ့ နှစ်ယောက်ကို “ ဟေ့ကောင်တွေ ထမီ အလံတွေ လွှင့်မနေနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ တို့နိုင်ငံ အလံ ပါလာရင်လွှင့် မပါရင် မလွှင့်နဲ့ တဲ့ ” ဖြန်းခနဲ ထ လာတယ်…။ နိုင်ငံတော်အလံ အတွက် မခံချင်စိတ်လား….၊ ဇာတိမာန်လား….။ အိုမန်သားတွေကလည်းဗျာ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှ သူတို့အားမနာ တဖုန်းဖုန်းလဲပြနေတယ်ဗျာ….။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့တန်းက ရန်ပိုင် အ၀ါကဒ်ထိပြီ။ မကြာပါဘူး နောက်တန်းက ရှင်းထုတ်တာ ဘောလုံးထိပါတယ် ပင်နယ်တီ ပေးလည်းရတယ် မပေးလည်းရတယ်ပေါ့ ဒီအလုံးက။ ဒိုင်က ပင်နယ်တီ ပေးလိုက်တော့ စတာပါပဲ အဲ့မှာ မြန်မာ စိတ်ဓာတ်…။
Ernesto တို့တစ်စု သွားအားပေးတယ်..။ ရှုံးမယ်ဆိုတာ သိနေတာပဲ ။မကျော်နိုင်ဘူးသိနေတာပဲ ဗျာ..။ မြန်မာဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရယ်.. အားကစားစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲ ကြည့်ချင်လို့ပါ။ ပစ်ခတ်ပွဲတွေ စတာပါပဲဗျာ။ ပထမက Ernesto တို့ အထူးတန်းနဲ့ ကပ်လျက် ရိုးရိုးတန်းက ပရိသတ်တွေက အိုမန် အရန် အသင်းက သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့ကောင် တွေကို ရေသန့် ပုလင်းနဲ့ စပေါက်တာပဲ( သူတို့ ပင်နယ်တီကန်ခါနီးမှာပေါ့ ) ပေါက်လည်းပေါက်ချင်စရာဗျာ။ မြန်မာဂိုးစည်းနားကပ် နေကြတော့ စည်းကြပ်ဒိုင်က ဝေးဝေးသွားခိုင်းတယ်..။သူတို့က ရစ်သီ ရစ်သီ လုပ်နေကြတော့ နီးနီးကပ်ကပ် မြင်နေရတဲ့ ပရိတ်သတ် ဘယ်ခံ နိုင်မလဲဗျာ။ ပြုပြင်သင့်တဲ့ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့။ ရေသန့်ဘူးနဲ့ ထုတော့တာပဲ အဲ့ကောင်တွေကို…။ပွဲက စတည်းက ယဉ်သကို ဆိုသလိုပါပဲဗျာ
အယ်ဟက်ဘ်စီနဲ့ သူ့အရန် ဂိုးသမားတို့ ပွဲမစခင် သွေးပူလေ့ကျင့်နေတုန်းတည်းက ရေသန့်ဘူးတွေ ၀င်နေတာ။ အဲ့ဒီ ဂိုးသမားကလည်း နည်းနည်း ရိုင်းတယ်ဗျ…။ပွဲက ပင်နယ်တီကနေ ဂိုးပေးရပြီးတည်းက ပိုပို ဆူလာတယ်..။နောက် သည်းမခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် ပွဲက ပျော်စရာ မောစရာ ဆိုတဲ့ အတိုင်း အစက ပျော်ပျော် ရွှင် ရွှင် ကြည့်နေရာက မောလာရပြီ။ အိုမန်ကစားသမားတွေ ဘောလုံးတောင် သွားမကောက်ရဲတော့ဘူး..။
မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ လူကြီး ကွင်းထဲ ၀င်လာတယ် …..သူဝင်လာပြီးမကြာပါဘူး.. ရဲတပ်ရင်း ၂ ရင်းစာလောက် ကွင်းထဲဝင်လာကြတယ်… ပွဲက ပိုဆူလာတယ် ဘောလုံးသမားတွေ မဟုတ်ဘူး ပရိသတ်တွေ… ကွင်းလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ ရဲတွေဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလည်းရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် သေနတ်ကိုင်တာတော့ မတွေ့ဖူးဘူး… မြန်မာပြည်သုဝဏ္ဏ ကွင်း မှာတေ့ ရှိတယ်ဗျာ…။အေးလေ အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ အုပ်ချုပ်ဆဲ တိုင်းပြည်ပဲကိုး…။ မလုပ်ပါနဲ့ဗျ မြန်မာတွေဟာ ယဉ်ကျေးပါတယ် ဒါပေမယ့် မေတ္တာ ဆိုတာ အလျားအနံ မရှိပေမယ့် အသွားအပြန် ရှိတယ်လေ .. ။ ပြောပြလည်း ကျွဲပါးစောင်းတီး သလို နွားပလာတာ ကျွေးသလို နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်း Ernesto လွန်ရာကျမယ်။ အဲ ဦးဇော်ဇော်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးဥက္ကဌကြီး ကွင်းထဲ ၀င်ပြီးလိုက်တောင်းပန်တယ်…။ ပိုဆိုးလာပါရောဗျာ…။ သူ့ပါ ပစ်တော့တာ..။ အဲ့မှာ Ernesto အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်… ဥက္ကဌရာထူးဘယ်သူက ပေးတာလဲတော့မသိဘူး လက်ရှိနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တွေမရနိုင်တဲ့ ပြည်သူ( ပရိသတ်) ဆီကလေးစားမှု ရ နိုင်လောက်အောင် သူဘာတွေ လုပ်ထားလို့ လိုက်တောင်းပန်ပြီး ငြိမ်ဖို့ ပြောရဲရတာလဲ ရှင်းပါတယ်… သူ အာရှ ဘောလုံးလောကမှာ မျက်နှာပျက်မှာစိုးတာ ထိပ်ဆုံးက နေမှာမလို့ပါ…။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ မြန်မာတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဟိုး အ၀ီစိရဲ့အောက် သူကိုယ်တိုင်ပို့လိုက်တာပါပဲ။ နဂိုရ်ကမှ ရေသန့်ပုလင်း ကွင်းထဲရောက်လို့ကျနေရတဲ့ အဆင့်အတန်းကို … သူ့ အဆင့်နဲ့ မရ နိုင်တဲ့ respect ကို အတင်းကာရော ဟန်ဆောင်ပြီး ကွင်းပတ် လိုက်တောင်းပန်နေတော့ကော ရနိုင်ပါ့မလား…။( Ernesto ရဲ့ အမြင်သီးသန့်ပါ)
သူလည်း တောင်းပန်လို့အပြီး နားနေတဲ့နေရာကိုပြန်သွားရော… အိုမန်အသင်းရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ထိုင်နေတဲ့နားက ခွမ်းခနဲ အသံကြားလိုက်ရ
လို့ လှည့်အကြည့် အိုမန်တွေ ကွင်းလယ်စည်းထဲ ပြေးဝင်သွားတာမှ လုံးခနဲပဲ။ သူတို့ဂိုးနည်းပြက ခေါင်းကိုလက်နဲ့ အုပ်လဲကျလို့ပေါ့..။
သွားပြီ….. Ernesto စိတ်ထဲတွေးလိုက်ပါပြီ။ ပိုးစိုးပက်စက်ကို ရှုံးပြီ။ ရလာဒ် ကြောင့်ရှုံးတာက လက်ခံနိုင်လောက်ပါတယ်။
ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိပါတယ်။ ခုဟာက စိတ်ဓာတ် sport spirit ရှုံးပြီ။ သူတစ်ပါးရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ဆုံးရှုံးပြီ။ နောက်တော့ ဦးဇော်ဇော်က ပွဲဖျက်လိုက်ကြောင်းကြေညာတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ပြန်လာတော့ ဘလော့ ၂ ခုလောက်ထိ ရဲက လမ်းပိတ်ထားတယ်။ တစ်ခြားလမ်းက သွားပါတဲ့။ ရဲတပ်ရင်းအပြင်မှာ တပ်ရင်း ၃ ခုလောက်ရှိလောက်တယ် ။ အကုန် လက်နက်ကိုင်တွေ ????? ဘာလို့လဲ Ernesto စဉ်းစားမရဘူး ။ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ အားကစားဆိုဒ်တစ်ခုကို လှန်လှောအကြည့် comment တစ်ခုက ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် “ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားအားဖိနပ် ထီး ရေသန့်ဘူးတို့နှင့် ပစ်ပေါက်သူအား ရှုံ့ချကြောင်း (ပစ်တဲ့လူကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ဒါပေမယ့် ပွဲဖျက်တဲ့အထိတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး) ဦးဇော်ဇော်ရေ ဟတ်ပြီလား ကိုယ့်အတတ်ကိုဆူးတာ ရိုးရိုးတန်းကို အလာကားပေးဝင် ရိုးရိုးတန်းက အောက်တန်းစားတွေက အရင်ပစ်ပေါက်ကြတာ”…..
“ စိတ်ဓါတ်အောက်ဆုံးထိထိုးကျနေတဲ့ အပေါစားပရိတ်သတ်တချို့ကြောင့် ပွဲပျက်ပါတယ်… ဥက္ကဌက လိုက်တောင်းပန်နေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးဥက္ကဌဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လေးစားပြီး ရေဘူးတွေ၊ပုလင်းတွေနဲ့ မပစ်တင့်ဘူး… ဒီပွဲလာကန်တဲ့အိုမန်..နောက်လာကြည့်တဲ့ တခြားနိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေ မြန်မာတွေကို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိလို့ စည်းကမ်းမဲ့လူနည်းစုကြောင့် အထင်သေးခံရပါလိမ့်မယ်.. နဂိုက ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ကြားထဲ တချို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အဆင့်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့် မြန်မာ့ အဆင့်အတန်းကျတယ်ဗျာ….. ” အစ ရှိသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ..့ ပြါဗျာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ… ဂျပန်စကားပုံတစ်ခု ရှိတယ်ဗျ….
“ အပြစ်မရှာပါနဲ့ အဖြေကိုရှာပါ လူတိုင်း အပြစ်ရှာတတ်ပါသည် ” တဲ့ အဖြေရှာရအောင်ဗျာ….
Ernesto ထင်တာက စိတ်ဓါတ်တွေက အစ ပြင်ရမယ် … ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးရိုးရိုး ပြင်လို့မရဘူး… ပြည်သူတွေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မြတ်နိုးပြီး နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ နာယက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ပြုပြင်ကြရပါမယ် ။ဒီလိုဆိုရင် အခုလို အဖြစ်မျိုး နောက်ထပ် မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်လာပါဆိုရင်တောင်မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး…။ သုဝဏ္ဏ ကွင်း က ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲကနေ Ernesto ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့် အမြင် ချဲ့ထွင်မှုပါ….
စစ်အစိုးရက လက်ခံကျင်းပတော့မယ်လို့ပြောထားတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်နဲ့တော့ အံကိုက်ပဲ။ အားပေးပါတယ် ပရိတ်သတ်တို့ရေ ဆက်လုပ်ပါ၊ အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို မမေ့ရင် ပြီးတာပါပဲ…။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ မြန်မာလူငယ်တွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလောက်မရိုင်း ခဲ့ကြဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ် လူငယ်တွေ တော်တော်များများရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အခဲမကြေမှု၊ မြိုသိပ်ထားရမှုတွေက ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းလေး တစ်ခုကြောင့်လည်း ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပေါက်ကွဲဖို့ နေရာရယ် အခြေအနေရယ်ကို စောင့်နေသလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အခြားနိုင်ငံနဲ့ ကစားတဲ့ အားကစားပွဲမျိုးမှာ ဒီလိုဖြစ်တာကတော့ အရမ်းကို ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပိုပြီး ရှက်သင့်ပါတယ်။
ဘာကို သတိထားမိလည်း ဆိုတော့ ဦးဇော်ဇော် နဲ့ ရဲချုပ် တောင်းပန်တာကို ဂရုမစိုက်ကြဘူး ဆိုတာပါ….
သူတို့က လူအများလေးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လား။ ပြည်သူတွေ လေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် ဒီလောက် ရှိခိုးပြီး တောင်းပန်နေစရာတောင် မလိုပါ။ တစ်ခွန်းပြောယုံနဲ့ ရပါတယ်။ ဒါမျိုး သက်သေတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းပဲ ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ လုပ်ရပ်က
ကိုကြောင်ပြောတဲ. မြေရိုင်းရင် ပန်းရိုင်းတာ ကိုလည်းလက်ခံပါတယ်
ခဗျတို.ဗမာလူမျိုးတွေ အားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိဘူး မနိုင်ရင် လူချဖို.ပဲသိတယ်
အဲဒီလို အောက်တန်းကျတဲ. စိတ်ဓာတ်တွေ မပြင်သ၍ ဘယ်တော.မှ မတိုးတက်ဘူး တဲ.